ထိပ်တန်း5ကြောက်စရာဂိမ်း - အွန်လိုင်းကာစီနိုအပိုဆုကုဒ်များ
*သတိပေးခြင်း* သင်သည် NetEnt ကာစီနိုကြောက်လန့်ဇုန်ထဲသို့ ၀ င်ရောက်သည်။ အဆိုးရွားဆုံးသောလေထုများ၊ ကျောရိုးအအေးဆုံးဇာတ်ကောင်များနှင့်ဆံပင်ကိုပြုစုပျိုးထောင်ပေးသည့်ငွေပေးချေမှုများပါဝင်သည်။
အရွယ်ရောက်ခါစကလေးများဝတ်ထားလျှင်သင်၌ကြောက်ရွံ့မှုအနည်းငယ်ရှိပါကဤနေရာတွင်လုံးဝလူမှုရေးအရလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်ထို pampers များကိုဆွဲထုတ်။ စတင်ကြပါစို့။
1) အဆိုပါ Wolf ကရဲ့ Bane
Nablos အတွက်လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေသောပါပလော Escobar သည်သူ၏ပြိုင်ဘက်များအားငွေသို့မဟုတ်ခဲ - ရွေးချယ်မှုနှစ်ခုပေးခဲ့သည်။
'The Wolf's Bane' သဘောတူညီချက်သည်ငွေများစွာသေကျေပျက်စီးစေနိုင်သည်။ မင်းမှာငွေကျည်ဆံတွေမရှိဘူးဆိုရင်ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ပြီးရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ Werewolf အတွက်ညစာစားပါတယ်။
ဤ5reel၊3အတန်းနှင့် 10 Payline ဗီဒီယိုကဒ်အထိုင် သင်တေးသီချင်းမှမည်မျှလွတ်သွားသည်ဖြစ်စေသင်အား ဆက်၍ ကစားနိုင်သည့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များစွာရှိသည်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တွန့်လိမ်သောလေထုနောက်ခံအသံသည်ဤဂိမ်းကိုအထူးပြုလုပ်ရန်ကူညီပေးသောကြောင့် NetEnt အသံဒီဇိုင်းအဖွဲ့ကိုဂုဏ်ပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အောက်ဖော်ပြပါ play ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့် soundtrack ထွက်စစ်ဆေးပါ:
ရွှေ Reef ကာစီနို
Golden Star ကာစီနို
ကောင်းသောနေ့4ကာစီနို Play
အတင်းအဖျင်း slot ကာစီနို
ဂရန်း Fortune မဂ္ဂဇင်းကာစီနို
ဂရန်း Mondial ကာစီနို
Guts xpress ကာစီနို
Hot Forex ကာစီနို
Hot Line ကာစီနို
Jackpot 21 ကာစီနို
Jackpot Fuity ကာစီနို
ထီပေါက် Luck ကာစီနို
ဂျယ်လီ Bean ကာစီနို
Jingle Bingo ကာစီနို
ဂျိုး Fortune ကာစီနို
ခိုင်ဆာ slot ကာစီနို
ရှငျဘုရငျ Billy ကာစီနို
la Fiesta ကာစီနို
la Vida ကာစီနို
Lady Fortune ကာစီနို
Las Vegas တွင်အမေရိကန်နိုင်ငံကာစီနို
လွှတ်ခြင်းအခွင့် slot ကာစီနို
ကံကောင်း Creek အဘိဓါန်ကာစီနို
ကံကောင်း Dino ကာစီနို
Lucky Me Slots ကာစီနို
Lucky Star ကာစီနို
LV BET လောင်းကစားရုံ
အဘိဓါန် Mandarin- နန်းတော်ကာစီနို
မန်ဟက်တန် slot ကာစီနို
လူတော်တော်များများဟာဟယ်လိုဝိန်းပွဲကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သုံးတတ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာဟယ်လိုဝိန်းကော့တေးအချို့ကိုစမ်းသပ်ခြင်းအားဖြင့် - NetEnt ရဲ့ဟယ်လိုဝင်းဂျက်ကြယ်လိုကြယ်ပွင့်လိုပါပဲ။
သငျသညျနက်နဲသောအရာ, ငရဲ hounds နှင့် decapitated ဖရုံသီးခေါင်းကိုချစ်လျှင် - ဒီဂိမ်းကိုသင်တို့အဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ၎င်းသည်ခေါင်းကိုက်။ မခွာနိုင်အောင်ရှာဖွေနေသည့်ခေါင်းကိုက်နေသောမြင်းစီးသူရဲရဲ့ကြောက်မက်ဖွယ်ဇာတ်လမ်းကိုအခြေခံသည်။
အကောင်းတစ် ဦး slot ကဂိမ်းကိုခစျြသူကိုငါတို့အကြားစိတ်ပျက်စရာအဘို့, ဒီတစ်ခုကိုလည်းအကြောင်းပြချက်များအတွက်အလွန်ကြီးစွာသောရွေးသည်။
ဟယ်လိုဂျက်တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ်5reel,3ပုံသေလိုင်းများပါသော 20 အတန်း slot က စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသော Walking Wilds၊ အခမဲ့လှည့်ဖျားများနှင့်“ အထူးသဖြင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အချက်များ” ရှိပါတယ်။Lector ဂျက် 'o'” mode ။
ဒီ mode နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာထူးခြားလဲ။ ကောင်းပြီ၊ သင်က slot reel တွင်မီးတံတိုင်းသင်္ကေတများစုဆောင်းရန်သင့်ကိုတာဝန်ပေးသည်။ ၎င်းသည် 1 ၏သာယာသောတောရိုင်းသင်္ကေတကိုအံ့အားသင့်စေနိုင်သည်။
3 မီးအိမ် = ငလျင်လှုပ်ပြီးသားရဲတောင့်တောင့်
6 မီးအိမ် = မီးပုံတောရိုင်း 'o stacked Jack'
9 မီးအိမ် = တိုးချဲ့မရဏရိတ်ရိုင်း
3) သွေး Suckers 1 နှင့် 2
အနီရောင်၊ နွေးထွေး။ သတ္တုအရသာရှိသောအရသာတစ်ခုခုကိုသင်ရေငတ်နေပါကသင့်အတွက်ဂိမ်း ၂ ခုရရှိမည်ဖြစ်သည်။
NetEnt's Bloodsuckers စီးရီးသည်၎င်း၏လူကြိုက်အများဆုံးထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပထမ ဦး ဆုံး Blood Suckers သည်ချက်ချင်းပင်အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပြီးယခုနှစ်ကာလအတွင်းကစားရန်အခြေခံလောင်းကစားရုံတစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုသင်ခန့်မှန်းနိုင်မယ်ဆိုတာသေချာပါတယ်။
ဤ5reel၊3အတန်းနှင့် 25 လိုင်းလိုင်း ဂိမ်းတွင်အထူးပါဝင်သည့်အင်္ဂါရပ်များစွာပါရှိသည်။Vampire Hunt 'ဆုကြေးငွေဂိမ်း.
သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တိုင်းအတွက်ငွေဒင်္ဂါးတွေရလိမ့်မယ်။ သင်တစ် ဦး သည်လင်းနို့ကိုရှာပါကလောင်းကစားဂိမ်းသည်အဆုံးသတ်လိမ့်မည်။
သွေး Suckers 2
နောက်ဆက်တွဲများကျိန်စာသင့်သည်။ 2nd သို့မဟုတ် 3rd ဂိမ်းများကိုအရင်ကဲ့သို့လူကြိုက်များသောဂိမ်းများပြုလုပ်ရန်အလွန်ခဲယဉ်းသည်။
ကောင်းပြီ၊ Blood Suckers2ရှိသွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်များ (သွေးရေငတ်နေသော) ကိုကျိန်ဆဲနိုင်သည်၊ သို့သော်ထိုဂိမ်းသည်ကျိန်ခြင်းမခံရပါ။
နှင့် မြင့်မားသောပြန်လာနိုင်မှုနှင့်ကစားသမားအချိုး 98%ဂရပ်ဖစ်၊ တိုးတက်ကောင်းမွန်သောဂရပ်ဖစ်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်များ - Blood Suckers2သည်၎င်း၏ယခင်လူကြိုက်များမှုထက် ကျော်လွန်၍ ညီမျှသည်။
One-Eyed Ed၊ Peggy Rotten, Polly နှင့် Mad Monkey တို့သည် NetEnt's Ghost Pirates များ၏တွန်းအားများနှင့်အတူသောင်တင်နေသည့်“ သင်္ဘောအစိတ်အပိုင်းနှင့်သင်္ဘောသားတို့၏အစိတ်အပိုင်းများ” ဖြစ်သည်။
2013 တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သည့်ဤ slot သည် blockbuster Pirates Of The Caribbean စီးရီးများ၏လွှမ်းမိုးမှုကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းယူခဲ့သည်၊ သို့သော်ထိုအယူအဆကိုပျော်စရာကာတွန်းဇာတ်ကွက်တစ်ခုပေးခဲ့သည်။
ဒီဟာကိုဒီနေ့ဖွင့်ထားလား အမြင်အာရုံရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်ကြည့်ကောင်းသည်မှာသေချာသည် - လွန်ခဲ့သောနှစ်များက6ကဲ့သို့အရောင်၊ ပျော်စရာနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသည်
သို့သော်ထူးခြားသောအထူးအင်္ဂါရပ်များမရှိခြင်းသည်ခေတ်သစ် NetEnt ဂိမ်းများ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဂိမ်းသည်ခဏအကြာတွင်သင်္ဘောဘီစကစ်ကဲ့သို့ဟောင်းနွမ်းလာသည်။
အိုကေ၊ ငါတို့ကဒီမှာနည်းနည်းလိမ်တယ် NetEnt ၏ Ozzy Osbourne slot သည်အမှန်တကယ်အထိမစတင်ပါ 21st နိုဝင်ဘာလ 2019, ဒါပေမယ့်ငါတို့ကတကယ်စိတ်လှုပ်ရှားမိလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီစာရင်းထဲမှာထည့်ရမယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, Ozzy စာတန်၏မျက်နှာကိုထောက်။ လင်းနို့၏ ဦး ခေါင်းကိုဝါးနေသည် - အကယ်၍ သူသည်မထင်မှတ်သောဟယ်လိုဝိန်းစာရင်းတွင်မပါလျှင်သူသည်မည်သူဖြစ်သည်။
NetEnt သည်မှောင်မိုက်မင်းသားအားအထူးကစားပွဲတစ်ခုဖြင့်ဂုဏ်ပြုနေသည်မှာသင့်အားအရူးအမူးရထားပေါ်တွင်နာရီပေါင်းများစွာစောင့်ရှောက်နိုင်မည့်အင်္ဂါရပ်များပါ ၀ င်သည်။
NetEnt ကာစီနိုတွင်ဟယ်လိုဝိန်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ကြီးမားသောအရာဖြစ်သည်။ ငါတို့အချစ်ရယ် freakin
သငျသညျ၌နေနှင့်အချို့သောကြောက်စရာရုပ်ရှင်ကြည့်ဒါမှမဟုတ်ဒီဟယ်လိုအိမ်နီးချင်းများကြောက်လန့်ဖို့ဝတ်စားဆင်ယင်ရပဲဖြစ်ဖြစ်, ငါတို့သည်သင်တို့အကောင်းတစ် ဦး ရှိသည်မျှော်လင့်ပါတယ်!
65 အခမဲ့မွန်းအားကစားပြိုင်ပွဲကာစီနိုမှာလောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ spins
30 အခမဲ့မစ္စတာ Mega ကာစီနိုမှာဆုကြေးငွေ spins
25 အခမဲ့အားလုံးသည်ဗြိတိန်ကာစီနိုမှာဆုကြေးငွေ spins
55 အခမဲ့လင်ကွန်းကာစီနိုမှာလောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ spins
125 ကွိုဆို slot ကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
LuckyDino ကာစီနိုမှာ 45 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ
Colosseum ကာစီနိုမှာ 55 မျှသိုက်ဆုကြေးငွေ
25 PrimeFortune ကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
80 Bertil ကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
100 Emu ကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
မိုင်ယာမီကလပ်ကာစီနိုမှာ 45 မျှသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ
160 အခမဲ့ NetBet ကာစီနိုမှာလောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ spins
30, La Vida ကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
အင်တာမီလန်ကာစီနိုမှာ 65 မျှသိုက်ဆုကြေးငွေ
120 အခမဲ့ SPECTRA ကာစီနိုမှာလောင်းကစားရုံ spins
175 Bertil ကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
125 Sverige ကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်ဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
35 အခမဲ့ EveryGame ကာစီနိုမှာဆုကြေးငွေ spins
SunnyPlayer ကာစီနိုမှာ 145 မျှသိုက်ဆုကြေးငွေ
130 အခမဲ့ CyberBingo ကာစီနိုမှာလောင်းကစားရုံ spins
ဒမ်းကာစီနိုမှာ 155 အခမဲ့လှည့်ခြင်းများ
ပတ္တမြား slot ကာစီနိုမှာ 105 မျှသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေ
100 Adrenaline ကာစီနိုမှာအဘယ်သူမျှမသိုက်လောင်းကစားရုံဆုကြေးငွေလွတ်မြောက်
DomGame ကာစီနိုမှာ 75 မျှသိုက်ဆုကြေးငွေ
0.1 1) အဆိုပါ Wolf ကရဲ့ Bane
0.2 2) ဟယ်လိုဝင်းဂျက်
0.3 3) သွေး Suckers 1 နှင့် 2
0.3.1 အသွေးသည် sucker
0.3.2 သွေး Suckers 2
0.4 4) တစ္ဆေပင်လယ်ဓားပြ